Hminthang/Ramkhel7kai dingin Warrant suah | Falam Online Media
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဂျင်မီ၊ လင်းလင်း၊ အင်းစိန်အောင်စိုး၊ ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်း၊အိပန်ဆယ်လို le ကိုမောင်မောင်အေး pawl cu kawlram ralkap in pukma 505 (ခ) thawn taya an cuai ih kaihkhih dingin warrant ca an suah tiah theihasi.
Kaihkhih dingih warrant an suah nak san cu an hmin thannak hmangin rampi remdaihnak siatsuah theimi ca pawl cu mipi hnen ah social media hmangin nasaten an thlah ṭheu ruangahasi tiah Tatmadaw Information Team in Facebook cahmai ah an tarlang.
Cuih tlun ah kaihkhih dingih thupek an suahmi mi7thuthawn pehpar in relh dingih rak bawmtu siseh, kaihkhih theilo dingin rak thuptu an umasi le cozah in hremnakape ding tikhalin an tarlangasi.
Tatmadaw Information Team Facebook cahmai ih ngan mi
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ နှင့် အညီ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ယန္တရားကို ပုံမှန်လည်ပတ် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မင်းကိုနိုင် (ခ) ပေါ်ဦးထွန်း၊ ကျော်မင်းယု (ခ) ဂျင်မီ၊ ထွေးလင်းကို (ခ) လင်းလင်း၊ အင်းစိန်အောင်စိုး၊ မျိုးရန်နောင်သိမ်း၊ အိမ့်ပိုးဥ (ခ) အိပန်ဆယ်လို နှင့် မောင်မောင်အေး တို့သည် ၎င်းတို့အား လူသိများသည့် အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်စေရန်အကြောင်းရှိသည့် ရေးသားချက်များ၊ ပြောဆိုချက်များကို Social Media များ၊ လူမှုကွန်ရက်များကို အသုံးပြုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၌ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကလည်း ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေနှင့်အညီ လူဖမ်းဝရမ်းများ ထုတ်ဆင့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသဖြင့် အထက်ပါ လူဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ဆင့်ထားသူများနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ရှိလျင်ဖြစ်စေ၊ သတင်းရရှိလျင်ဖြစ်စေ အနီးဆုံးရဲစခန်းများနှင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် တိုင်ကြားနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များသို့ သတင်းပေး တိုင်တန်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား လက်ခံထားပါက လက်ခံထားသူများကိုပါ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
← Atufang Pi Suu Kyi le U Win Myint dinhmun
CDM thu ah Falam Mino pawl Lungawi Lo →